Tallaabada xigta ee xaqiiqada dalwaddii ama cutubkii Madoobaa Madoow | Abuurista khadka tooska ah
Tallaabada xigta ee xaqiiqada dalwaddii ama cutub ka mid ah Madowga Madoow
Pablo Gonder | | General
Xaqiiqda dhabta ah iyo waaya-aragnimada inagu soo dhoweynaysa cutubka Black Mirror u dhawaanshaha ay u leedahay mustaqbalkaas layaabka leh ee suurtogalka ah, xaaladdan tikniyoolajiyadda ay shirkaddu na tusayso OMNIPRESENZ waa mid bulsho ahaan la aqbalay maxaa yeelay ma muujineyso isticmaalka xun ee suurtagalka ah ee tiknoolajiyaddaas.
Waxaan had iyo jeer la xiriirnaa tikniyoolajiyadda xaqiiqda dalwaddii dalxiis laakiin tani maahan inay ku ekaato ciyaar fudud laakiin waa laga sii gudbi karaa oo diirada la saari karaa mowduucyada sida daawo, dalxiis iyo nooc kasta oo mowduucyada bulshada. Shaki la'aan, tikniyoolajiyadda ay bixiyaan waa wax soo jiidasho leh.
Waxaan marwalba aragnay xaqiiqda dalwaddii oo ah tikniyoolajiyad diiradda saareysa adduunka ciyaaraha fiidiyowga oo aad muraayadaha gashato oo aad bilowdo inaad disho zombies sida waalan, runta ayaa ah in tikniyoolajiyaddan waxaa loo isticmaali karaa mowduucyo tiro badan, fikradda isbedelku waa in laga fikiro maxaa la samayn karaa iyada iyo cidda ka faa'iideysan karta isticmaalkeeda suurtagalka ah.
Macluumaad yar oo ku saabsan abuuraha iyo shirkadda:
1.1 Maxay tan ku guuleysan kartaa?
Daniel waa cilmi-baare maadooyin kala duwan, farshaxan yaqaan, iyo ganacsade. Waxaa loo arkaa a sahamiyaha farshaxanka elektiroonigga ah iyo a naqshadeeyaha isdhexgalka oo leh dano gaar ah xaqiiqada dalwaddii iskujirta, ka telepresence iyo hal-abuurnimo bulsho. Wuxuu ka mid yahay aasaasayaashii iyo cilmi baarayaashii urur aan macaash doon ahayn BeAnotherLab, abuurayaasha “Mashiinka Ahaanshaha Mid Kale”(Mashiinka Si Uu U Noqdo Mid Kale) Waa nidaam adeegsada dhalanteedka hantida jidhka, farshaxanka waxqabadka iyo xaqiiqda dhabta ah ee ah “inaad naftaada gashid kabaha kale” kor u qaadida dulqaadka iyo isfahamka labada dhinac, iyo fahamka xiriirka ka dhexeeya aqoonsiga iyo damqashada marka laga eego dhinaca jidhka.
Sannadkii 2015-kii ayuu isla aasaasay Omnipresenz, shirkad XR ah (Extended Reality) oo diiradda saareysa nidaamyada xaqiiqda dalwaddii lagu rakibay, telepresence iyada oo loo marayo avataar aadanaha, iyo tiknoolajiyada shabakadaha bulshada, kor u qaadista isku xirnaanta aadanaha iyo isbeddelka wanaagsan ee bulshada. Hadafka shirkaddu wuxuu hadda diiradda saarayaa Abuur qaabab cusub wajiga isticmaalka tikniyoolajiyadda xagga adeegyada ganacsiga, madadaalada, farshaxanka, waxbarashada iyo caafimaadka.
Daanyeel waa joogay TDW18 (Toddobaadka Naqshadaynta Tenerife 2018) dhacdo naqshad ah halkaas oo uu awood u lahaa inuu ka hadlo tikniyoolajiyadiisa oo uu si toos ah u tuso habka iyo khibrad dhab ah in qofku gaadho markuu ku dhex milmo noocan ah xaqiiqada dalwaddii. Soo bandhigidiisa wuxuu ka doortay qof ka mid ah dhagaystayaasha wuxuuna u dhigay muraayadaha dhabta ah ee dhabta ah, iyada oo loo marayo fiidiyoow qofka waxaa la aamin sanaa inuu kujiro jirkaas kale, ficilada uu Daanyeel ku fuliyay qaab iskuduwaha kuwa fiidiyowga ka dhigtay waayo-aragnimada xitaa mid dhab ah. Daanyeel wuu taabtay qofka kale, wuuna siiyay cunto, wuxuuna u dhaqaaqay qaab aad moodo inuu yahay fiidiyowga uu daawanayay.
Maxay tan ku guuleysan kartaa?
Aynu qiyaasno qof aan dhaqdhaqaaq lahayn jirka iyo in fiidiyowga lagu arki karo sida qof u socdo roobka, kaaliyaha ayaa ku daadin kara dhibco biyo wajigooda si loo kordhiyo dareenka dhabta ah.
Waa waayo-aragnimo gaar ah meesha xaqiiqada dalwaddu waxay noqota avatar taasi waxay dooneysaa inay kordhiso khibradaha dadka.
A macquul loo isticmaalo dhinaca dalxiiska waxay noqon kartaa adeegsiga waxa ay ugu yeeraan "avatars" qofka dhabta ahi wuxuu dhigaa muraayadaha indhaha adigana waad arki kartaa wax kasta oo qofkaasi sameeyo awood u lahaanshaha xitaa bixinta amarrada lagu fulinayo dhammaan noocyada ficillada. Avatar-kan ayaa tagi kara suuqyada dhogorta iibso shay aad jeceshahay ka dibna u soo dir guriga adiga, avatar-ka ayaa ku siin kara dalxiis hudheelka xiga ee aad booqato, dhammaan noocyada fursadaha.
Waxay noqon kartaa cutubka Black Mirror laakiin maanta waa nolosha dhabta ah ee hadda jirta, mustaqbalka ayaa go’aamin doona nooca ay tignoolojiyaddani ka faa’iideysato Maxaad u malaynaysaa in mustaqbalka tani noqon karto?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tallaabada xigta ee xaqiiqada dalwaddii ama cutub ka mid ah Madowga Madoow
Carmen oo jirta 87 sano ayaa naga yaabisay sawiradeeda MS Paint